Nampihena ny haavon'ny fandrahonany i Great Britain
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Nampihena ny haavon'ny fandrahonany i Great Britain
Sekretera an-trano any UK Priti Patel
"Ny fampihorohoroana dia iray amin'ireo risika mivantana sy akaiky indrindra amin'ny filaminam-pirenena," hoy ny sekretera an-trano UK
Ny haavon'ny fandrahonana "be" dia midika hoe "azo inoana" ny fanafihan'ny mpampihorohoro
Ny fampihorohoroana dia mijanona ho iray amin'ireo risika mivantana sy mivantana indrindra ho an'i UK
Ny governemanta UK, ny polisy ary ny sampam-pitsikilovana dia manohy miasa tsy an-kijanona amin'ny famahana ny fandrahonana ateraky ny fampihorohoroana
Ny sekretera an-trano any UK Priti Patel dia nanambara androany fa Grande-Bretagneny haavon'ny fandrahonana ho an'ny fampihorohoroana dia nidina hatramin'ny “mafy” ka lasa “be”.
Ny ivon-toerana momba ny fampihorohoroana iraisan'ny britanika (JTAC) dia nampidina ny ambaratonga fandrahonana ho an'ny fampihorohoroana ambaratonga dimy avy any amin'ny ambaratonga fahefatra ka hatramin'ny ambaratonga fahatelo avo indrindra, hoy i Patel tamin'ny fanambarana an-tsoratra nataony tamin'ny parlemanta anglisy.
Ny fanapaha-kevitra dia noho ny "fihenan'ny fiakaran'ny vidin'ny fanafihana any Eropa hatramin'ny fahitana teo anelanelan'ny volana septambra sy novambra" tamin'ny taon-dasa, hoy izy.
Na izany aza, "ny fampihorohoroana dia iray amin'ireo risika mivantana sy akaiky indrindra amin'ny filaminam-pirenena," hoy ny sekretera an-trano.
Ny haavon'ny fandrahonana ho an'ny fampihorohoroana amin'ny "be dia be" dia midika hoe "mety" ny fanafihan'ny mpampihorohoro.
"Ny vahoaka dia tokony hanohy hiambina ary hitory ny olana amin'ny polisy," hoy i Patel.
"Ny governemanta (anglisy), ny polisy ary ny masoivohon'ny sampam-pitsikilovana dia manohy miasa tsy misy fitsaharana hiatrehana ny fandrahonana ateraky ny fampihorohoroana amin'ny endriny rehetra ary ny haavon'ny fandrahonana dia mbola eo ambanin'ny fandinihana hatrany," hoy izy nanampy.
Tamin'ny 3 Novambra 2020, nampiakatra ny haavon'ny fandrahonana ho fampihorohoroana i Britain tamin'ny “lehibe” ka hatramin'ny “henjana”, midika izany fa tena misy ny fanafihana.
Izany hetsika izany dia nitranga taorian'ny nahafatesan'ny olona efatra tamin'ny tifitra nataon'ny mpampihorohoro tany Vienna renivohitra Australiana ary olona telo no maty taorian'ny fanafihana antsy tany Nice, France.
Ny ambaratonga "henjana", ny ambaratonga faharoa avo indrindra izay "mitsikera" fotsiny amboniny, dia tratra ny volana Mey 2017 taorian'ny daroka baomba tao Manchester Arena, izay nahafatesana olona 22, anisan'izany ny ankizy maromaro ary maratra an-jatony.
Hon. Edmund Bartlett dia nihaona tamin'ny Tale Mpanatanterahan'ny Komisionan'ny Integrity
Filohan'i Haiti: tsy nahomby ny fanandramana fanonganam-panjakana sy famonoana olona